Booliiska oo Baydhabo ku soo bandhigay hub ay soo qabteen – Radio Muqdisho
Ciidanka booliiska ayaa magaalada Baydhabo ku soo bandhigay hub iyo maleeshiyaad ka tirsan Shabaab oo ay ku soo qabteen howlgal ay ka sameeyeen magaaladaasi.
Booliiska ayaa howlgal ay maalmihii la soo dhaafay ka sameeyeen magaalada Baydhabo waxa ay guri guri ugu baarayeen guryaha iyo goobaha ganacsiga ee ku yaala magaaladaasi, waxeyna ku soo qab qabteen hub aad u farabadan iyo dhalinyaro lagu tuhunsanyahay ineey ka tirsanyihiin maleeshiyaadka Alshabaab.
Taliyaha qeybta booliiska gobolka Baay Mahad C/raxmaan Aadan ayaa sheegay in howlgallada ka socda magaalada Baydhabo loogu talagalay in lagu xaqiijiyo ammaanka magaaladaasi, wuxuuna intaa raaciyay ineey sii wadi doonaan howlgallada noocan oo kale ah.
Wuxuu ka digay in hub shari darro ah lagu dhex wato magaaladaasi, isagoo tilmaamay ineey dembi tahay heysashada hubka sharcidarrada ah.
Jaamacadda Carabta oo ka qeyb qaadaneeyso dib u dhiska dalka
Danjire "Ameeriko" oo marti ku ahaa barnaamijka kulanka todobaadka (Dhageyso+Sawirro)